भिडियो हेरौँ, सिडियो साहवलाई भनौँ, पर्वत महोत्सवमा के के हुन्छ ? – ebaglung.com
भिडियो हेरौँ, सिडियो साहवलाई भनौँ, पर्वत महोत्सवमा के के हुन्छ ?
२०७३ माघ २०, बिहीबार १२:०१	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
महोत्सव परिसरभित्रै १४ बर्षिया बालिकामाथि अनुचित हर्कत गर्ने प्रहरी थुनामा !
पर्वत २०७३ माघ २० । पश्चिमान्चल औद्योगिक मेला तथा पाँचौ पर्वत महोत्सव सकिन अब २ दिन बाँकी छ तर महोत्सवमा देखिएको आयोजकहरुको लापर्बाही र सुरक्षाकर्मीबाट भएको गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कामको टीका टिप्पणी भने अर्को छैठौँ पर्वत महोत्सव नआउँदा सम्म चलिरहने छ ।
औद्यागिक मेला तथा महोत्सव जस्तो गरिमायुक्त कार्यक्रमका आधारभूत मान्यताहरुलाई बेवास्ता गरी लोकदोहोरी कलाकारहरुलाई पोस्ने काममात्र भयो भन्दै जनस्तरबाट चौतर्फी बिरोध भैरहँदा महोत्सव स्थलमा स्टल राखेर बसेका उद्यमी व्यापारीहरु प्रति आयोजकहरुले अख्तियार गरेको सौतेनी व्यवहार र उनिहरुको सुरक्षामा देखिएको गैह्रजिम्मेवारी पनको बिरोधमा महोत्सव स्थल हिँजो आन्दोलित बन्यो । राति असुरक्षित हुनु परेको पीडा र व्यापार व्यवसाय चौपट भएको विषयमा उद्योमी व्यापारीहरु आयोजकहरुसंग रुष्ट देखिए, कराए, चिल्लाए, आफुहरुमाथी भएको दुव्र्यवहारको विरोध गरे । पाँचौ पर्वत महोत्सवमा १४ बर्षिया बालिकामाथि दुव्र्यवहार भएको भन्दै स्टलव्यापारी आन्दोलित बनेका छन् । यता व्यापार नभएको चिन्ता उता मध्यरातमा स्टलमा सुतिरहेका महिला तथा बालिकामाथि दुव्र्यवहार भएपछि स्टल व्यापारी आन्दोलित बनेका हुन् ।
तर स्टलमा बसेका महिलामाथी रातिको समयमा भएको अभद्रव्यवहार, आयोजकको लापर्बाही प्रति सरोकारवाला निकाय निरीह प्राणीको रुपमा देखा पर्नु अर्को दुर्भाग्य भएको आम नागरिकको टिप्पणी छ ।
पर्वतबाट इबागलुङ डटकमका संपादक महेन्द्र केसीव्दारा प्रेषित भिडियो हेरौँ, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका सिडियो साहबलाई भनौँ र निकास निकालौँ । पर्वत महोत्सवलाई बदनाम हुनबाट रोकौँ आम नागरिकको आग्रह छ ।
इबागलुङ डटकमका संपादक केसी लेख्छन्- महोत्सव परिसरको सुरक्षाको लागि खटिएका प्रहरी जवानले १४ बर्षिया बालिकामाथि अनुचित हर्कत गरेपछि उनी रुदै आफन्तसँग पुगेकी थिइन । उनको चिच्चाहवट आवाजले जम्मा भएका स्टल व्यापारीले प्रहरीलाई कारवाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
महोत्सवको आठौ दिन राती एकाएक स्टलमा तोडफोड सहित बालिकामाथि दुव्यवहार भएको भन्दै स्टल व्यापारी स्टलनै बन्द गरी आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरुले सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीबाटनै दुव्र्यवहार भएको बताएका छन् । एक महिलाले भनिन् प्रहरी हाम्रो सुरक्षाको लागि राखिएको होकि हाम्रा चेलीबेटीमाथि दुव्र्यवहार गर्नको लागि राखिएको हो । व्यापार छैन हामी घाटामा गएका छौं त्यसमाथि हाम्रा चेलीमाथि दुव्र्यवहार भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
बालिकामाथि अनुचित हर्कत गर्ने प्रहरी जवानलाई थुनामा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक शेखर खनालले बताए । उनले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान भैराखेको बताए । ड्यूटीको समयमा आरोपित प्रहरी जवानले मादक पदार्थ सेवन गरेको मेडिकल रिपोर्टमा प्रमाणित भएको र दुव्र्यवहारको बारेमा भने अनुसन्धान भैराखेको भन्दै प्रनाउ खनालले सिपाहीको नाम भने खुलाउन चाहेनन् । तर उनले सिपाहीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान भैराखेको र दुव्र्यवहार प्रमाणित भए विभागीय कारवाही गर्ने बताए । महोत्सवमा बालिकामाथि दुव्र्यहबार भएपछि महोत्सवमा दर्शकको चाप पातलो हुदै गएको छ ।
व्यापार मेला भन्ने महिलाको इज्जत माथी धावा बोल्ने ? पर्वत महोत्सव नाम दिने कामकुरा गाईजात्रे गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरु अहिले पर्वतका घरघरमा उठिरहेका छन् । आम नागरिकको एउटै आवाज छ, पर्वतको ईज्जत राखौँ, महोत्सवको गरिमा बढाऔँ, स्थानीय उत्पादनको व्यापार वृद्धि गरौँ, पर्यटनको विकास गरौँ, संस्कृतिको संरक्षण गरौँ … ।
यसैवीच पाँचौ पर्वत महोत्सवका अवसरमा आयोजित पश्चिमाञ्चल स्तरिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि स्याङ्जाले हात पारेको छ ।
बुधवार सम्पन्न अन्तिम प्रतिस्पर्धामा ३÷२ को सोझो सेटमा पर्वतलाई हराउँदै स्याङ्जाले उपाधि हात पारेको हो । खेलमा दुवै समुहबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । बेष्ट अफ फाईभको आधारमा खेलाईको प्रतियोगितामा २५–२३, ३३–३१, २७–२५,२५–२२ र १६–१४ को अन्तरले पर्वत उपविजेता भएको थियो ।
उपाधि हात पारेसँगै स्याङजा भलिवल समुहले नगद पुरस्कार १ लाख १ सय ११ प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता पर्वत भलिबल समुहले नगद ६० हजार १ सय ११ सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।
प्रतियोगितामा बागलुङ भलिबल समुह र भुकताङले भलिवल समुहले सान्त्वना स्थान हात पारेका छन् । उनिहरुले नगद २० हजार १ सय ११ को दरले पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको बताइएको छ ।
भलिबल प्रतियोगितामा विभिन्न जिल्लाका ११ खेल समुहले भाग लिएका थिए । स्याङ्जा भलिबल समुहका खेलाडीलाई जनहि ५÷५ हजार रुपैया यातायात खर्च समेत उपलव्ध गराइएको खेल संयोजक प्रकाश कर्माचार्यले जानकारी दिए ।
प्रमुख आयुक्त यादवको प्रश्न: चुनावको मिति सरकार या आयोग कस्ले तोक्ने हो ?
कोरियाको मासिक २ लाख त्यागेर गाउँमा दुग्ध व्यवसायमा मग्न छन, पन्थ !